Fitaovana eny an-tsaha - Potatoes News
Ny vahaolana crop.zone dia dingana mandroso amin'ny famoahana ny vokatra hafa.
Sotrokely na fehikibo - Grimme GL 430, GB 430
Zo hanamboarana: Mpivarotra sy tantsaha mitady fifandanjana politika
Manjary miankina bebe kokoa amin'ny data sy logiciel ny tantsaha. Misy lafy ratsy eo aminy, toy ny adihevitra momba ny ...
Mpanaparitaka spinner ho an'ny voly laharana: angano
Maty mafy ny fahazarana taloha. Toy izany koa ny stereotype. Matetika heverina fa tsy manana ny marim-pototra, ny marina na ny teknolojia ny fanaparitahana spinner fampielezana ...
Masinina fambolena vaovao: mora kokoa amin'ny fambolena miovaova
Anselm Claassen ao Vierhuizen (Gr.) Dia mampiasa mpamboly vaovao amin'ity vanim-potoana ity ho an'ny fambolena miovaova amin'ny ampahany amin'ny ...
Tsy azo ihodivirana ny famafazana rano, saingy misy fomba fanalefahana azy
Na ny fampiharana apetraky ny tany amin'ny fampiharana fambolena na aorian'ny famoahana ain'olombelona, ​​dia mbola olana mitatao ho an'ny mpamboly legioma ihany ny famafazana tsiranoka.
Homburg dia mamorona sprayer ho an'ny ovy sisa tavela
Homburg Holland, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'i Garford, dia namorona milina famafazana izay mitaha amin'ny fitehirizana ovy amin'ny fomba kendrena. The SpotSprayer ...
Manampy amin'ny fisafidianana ny nozotra amin'ny fiarovana ny voly: afaka manao izany ny fampiharana "Spray assist"
fitaovana nomerika vaovao manampy amin'ny fanatsarana ny biolojika vokatra fiarovana ny vokatra amin'ny voamaina, katsaka, voapanga, betiravy sy ovy
Ny safidiko: mpamboly 4-laharana miaraka amin'ny tsindrona
Rehefa afaka folo taona, ny mpamboly Jan-Albert Brands avy any Andel (GR) dia nanakalo ny mpamboly laharana Grimme 4-laharana. Noho ny traikefa nahafinaritra, ...
Mihena kely indray ny faritra ovy voa: 41711 ha
Ovy misy brabant: hosoka lehibe sy miverimberina